Pathak Bichar - Setopati | Setopati - Nepal's Digital Newspaper
हाम्रो सिष्टम अपग्रेट भइरहेकोले यहाँको असुविधाका लागि क्षमाप्रार्थी छौ।
Monday, June 25 , 2018 | सोमबार, आषाढ ११, २०७५ |
मजदूरसँग कसरी आउँछ ग्यालेक्सी र आइफोन?
श्रीकमल द्विवेदी, जियोलोजिस्ट - गणतन्त्र आएपछि विदेशमा श्रम गर्न जाने कामदारको संख्या झन बढ्यो । कारण "नेपाल राजनीति उद्योग प्रा.लि. हो। मुख्य गरेर पार्टीहरुका ट्रेड युनियनहरुको राजनीतिक उद्योग हो। कारखानाका म्यानेजरहरु सस्तो नोकिया मोबाइल बोक्छन्, ट्रेड युनियनका नेताहरु आइफोनदेखि ग्यालेक्सी बोक्छन्।
सिटसंख्या नघटाउ : तुलानारायण साह
तुलानारायण साह - संविधानसभाको सिट सङ्ख्या मुलभुतरूपमा प्रतिनिधित्वको राजनीतिसँग सम्बन्धित छ । केन्द्रिय विधायिकामा जस्को प्रतिनिधित्व बढी हुन्छ, शासनमा उही वर्गको हालीमुहाली कायम हुनजान्छ । शासन प्रणाली र शासकहरूको प्रवृतिको छायाँ प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्यायालय, ...
'नेपाललाई घाटा ,ठेकेदारलाई काखी : श्रीकमल द्विवेदी
प्राधिकरणले जाडो याममा कम उर्जा दिने योजनाहरुसंग पिपिए गरेको खराब योजनाहरुलाई आधार बनाएर यो योजनामा थप्नु सहि छ भन्नु कदापि सहि होईन। प्राधिकरणको प्रत्येक पि पि ए मा राजनैतिक र आर्थिक चलखेल हुन्छ। साना योजनाको पनि ८- १० लाख खाएर बढी दरमा सम्झौता हुनेकुरा जग जाहेर छ ।
ठमेल जलेपछिको ठहर
योगेश आदी - संसारको सबैभन्दा बाक्लो बस्ती भएको शहर नेपालको भक्तपुर रहेछ । काठमाडौंको भित्री शहर सबैभन्दा जोखिमपूर्ण बस्तीमा गनिंदो रहेछ । हामीले हमेशा चर्चा 'भूकम्पीय जोखिमको मात्र गर्यौ, तर आज डरलाग्दो जोखिमको अर्को रुप आगलागी पनि हो, भनेर ठमेल आगजनीले प्रमाणित गरेर देखायो।
महाकालीमा दार्चुलाको आँसु
रश्मी राइखोला, दार्चुला - नमस्कार गर्न पनि मेरा हातलाई फुर्सद छैन, म अहिले तुइनमा झुन्डिएर महाकाली नदी तर्दैछु । आफ्नै घर जान अर्काको ढोका भएर जानु पर्ने बाध्यता उपल्लो दर्चुलाबासी को दैनिकी बनेको अवगत गराउन चाहन्छु ।
लिलिपुट किन हटाएको ?
आराधना गुरुङ - टंक कार्कीको आलेखको शीर्षक पहिले 'वामपन्थीहरू लिलिपुट भयौं' या यस्तै थियो। अहिले शीर्षक त टाढाको कुरा, लिलिपुटको प्रसंग हटाइएको रहेछ। किन त्यसो गरियो भनेर कारण दिनु पर्दैन ?
सुदर्शन घिमिरे - अब म भ्रष्टाचारीहरु कसैलाई पनि बाँकी राख्दिन । त्यो कामको शुरुवात म जलस्रोत सचिव हुँदाका मन्त्री वलदेव मजगैयाँबाट गर्छु ।
मेरो स्पष्टोक्तिः वीरेन्द्रबहादुर वस्नेत
वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत - सेतोपाटी डट कममा माधवकुमार नेपालको अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको रहेछ। उहाँले मेरो नाम किटानी गरि भन्नुभएछ, 'हजुर प्रधानमन्त्री बन्दिनुपर्यो, प्रधानसेनापति प्याराजंग थापाको सन्देशवाहक बनेर वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले भने।' यसमा म...
खिलराज, सूर्यनाथको सम्पत्ति छानबिन होस्
जेपी गुप्ता - सेतोपाटीमा किरण भण्डारीले मलाई आर्थिक मामिलामा ‘बदनाम’ भन्नु भो । ठिकै छ । मेरो अनुरोधको जवाफ पाउन अभियान थाल्नुस् । मुद्दा बनाऔं । १- सम्पति छानबिन सम्बन्धी लम्साल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक होस्, २- यसमा उल्लेखित सबै उपर अख्...
जनकपुरको सजिव चित्रण
तुला नारायण साह - धन्यवाद अमितजी, दिपनारायणजीलाई एउटा पात्र बनाएर जनकपुरको अवस्थाको सजिव चित्रण गर्नुभएकोमा । मैले पनि २०४५ सालदेखी जनकपुरको समाज, राजनीति, विकाससँगसँगै दिपनारायणजीको जीवनको उतार चढाव देख्दैछु । २०४५ मा जनकपुर कलेजमा भर्ना भएपछि नै शहर बजार चौक च...
अनियमितता भएको छैन
नील हिरा समाज
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन किन?
डा सुरेन्द्र भण्डारी
मेडिकल शिक्षामा माओवादीले लुकाएको स्वार्थ
डा. जीवन क्षेत्री
सर्वोच्चको फैसला र भरतपूरको जनअदालत
डा. लोक भट्टराई
Usable 'full budget'
Dr. Hemant Dabadi
Mayors can reduce vehicle tax
फिनल्याण्ड आउँदै हुनुहुन्छ यसो गर्नुहोस्
मास्टर तहको पढाई विश्वविद्यालयहरुमा हुन्छ। केही पोलिटेक्निक्सले मास्टर तहको पढाई पनि सञ्चालन गर्छन तर त्यसका लागि काम गरेको अनुभव खोजिन्छ । हेलसिन्की विश्वविद्यालय, आल्टू विश्वविद्यालय विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू हुन्। यी विश्वविद्यालयमा भर्ना निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ। फ़िनल्याण्डमा वर्षको एक पटक विधार्थी भर्ना कार्यक्रम हुन्छ, अगस्ट -सेप्टेम्बरमा।
बढ्दो आत्महत्या सामाजिक सरोकारको विषय
आत्महत्याको घटनालाई कुनै परिवारको निजी मामला भनेर अनदेखा गर्नु भन्दा पनि एउटा सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, आर्थिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। गहन विश्लेषण बिना सरल अभिव्यक्ति दिएर सामाजिक दायित्वबाट पन्छिनु चेतनशील व्यक्तिको पहिचान होइन। एक आपसमा सहयोगको भावना, मनोबैज्ञानिक तथा मानसिक समस्याबारे शिक्षा/चेतना, सकारात्मक सोचाई, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सामाजिक समस्याहरुप्रतिको संवेदनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने आत्महत्याद्वारा अकाल मृत्युको घटनालाई धेरै हदसम्म न्युनिकरण गर्न सकिन्छ।
बिभु थपलिया श्रेष्ठ
एउटा नर्सको स्विकारोक्ती: के डा. केसी राष्ट्रद्रोही नै हुन् त?
म एक स्वास्थकर्मी हुँ। मैले मुलुकका बिभिन्न जिल्लाहरुमा करिब १५ वर्षसम्म नर्सिङ सेवा प्रदान गरे। मेरो कार्यक्षेत्र दुर्गम र सुगम दुवै ठाउँमा थियो। भाग...
मैलो र फाटेको लुगामा सजिएर
आफूलाई धकेल्दै आफैंले
हर्केकी छोरीले ल्याइपुर्‍याएकी छ
सिंहको गर्जन चल्ने ठाउँमा।
स्थिति सकसपूर्ण छ। अब कुरा कसरी अगाडि बढाउने साएथुरेनलाई थाहा छैन। मौनतालाई चिर्दै सेतो कार निक्कै स्पिडमा कण्डोयोकी गार्डेनको पश्चिम गेटबाट छिर्छ। उनीहरु उभिइरहेको ठाउँबाट प्रष्ट त्यो देखिन्छ। गाडी अचानक रोकिन्छ। निकै हतारमा एउटी अर्की महिला गाडीबाट ओर्लिन्छे र साएथुरेनहरु भएतिर आउँछे। उसले चोको हात समाएर तान्छे र कानेखुसीको पारामा अजराकी आमालाई भन्छे, ‘तैंले गर्दा हामीलाई पनि समस्या भएको छ। छिमेकीहरुले प्रश्न गर्छन्। पुलिसले पनि चियो गर्छ। बाहिरबाट आएका कुलाहरुलाई शरण नदिनु भनेर पुलिसले उर्दी गरेको छ। आजदेखि आफ्नो व्यवस्था आफैं गर। सबभन्दा राम्रो त तँ त्यही मस्जिदमा जा।’ चोलाई घिसार्दै महिला अघि बढ्छे।
काकाले आश्चर्य मान्दै मुन्टो हल्लाएर थप्नुभयो, ‘हो नि त, कति चाँडो कुरा बुझेको। जीवनमा मात्रै हैन, संसारमा नै नराम्रा चिज जति चिन्न सक्यो र फाल्न सक्यो भने त सबै राम्रैराम्रा त बाँकी हुन्छन् नि।’सिकर्मीका कुरा मलाई साहै्र घत लाग्यो। ती कुराले मलाई आँखा खुलेजस्तै भयो। उहाँ पक्कै पनि आदरणीय हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अझ उहाँले कानमा सिउरने गरेको सिसाकलम पनि मलाई महान् लाग्यो। मनमा लागेका कुरा मैले रोकिरहन सकिनँ। ‘काका, तपाईंको त्यो सिसाकलमचाहिँ मलाई दिनोस् न है।’ मैले मुख फोरिहालेँ, ‘बरु मैले भर्खरै किनेका नयाँ सिसाकलम तपाईंलाई दिन्छु, हुन्न?’ मेरा कुरा सुनेर हाँसिरहेका काकाले बिस्तारै हाँसो रोकेर भन्नुभयो, ‘यो सिसाकलम त्यस्तो विशेष केही होइन। तिम्रोजस्तै साधारण हो।’
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
प्रविणलाई प्रहरीले गोली हाने कि आफैंले?
फुलकुमारी महतो मेमोरियल ट्रष्टद्वारा बाढीपीडितहरुलाई राहत सामाग्री हस्तान्तरण
खोकनामा साइकल जात्रा
पौरख: ‘डबल डिग्री होल्डर’ कवाडी फर्निचरवाला
फोटो फिचर: भोट हाल्ने फोटो खिच्न अझै चटारो
केसी अनसन सुखद निष्कर्षतिर
पोखरीमा डुबेर युवाको मृत्यु
राप्रपा प्रजातान्त्रिकले पुर्‍यायो केन्द्रीय सदस्य र सांसद
सशस्त्रको तलब रोकियो
जयनगर-महोत्तरी रेल फागुनदेखि सरर, सिमरासम्म रेल पुग्दै
१२ लाख नयाँ मतदाता थपिए : तेस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाउने
सात प्रदेशमा सात एआइजी खटाउने तयारी
रसुवागढी नाकामा पाँच सयभन्दा बढी मालबाहक कण्टेनर अलपत्र
जिल्लामा चिकित्सक नजानुका पाँच कारण
मिर्गौला प्रकरणमा मनमोहन अस्पतालका तीन कमजोरी
शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको प्रश्न : भारतसँग कुरा गर्न किन डराउने?